म्यानेजरले बनाइदिएको जिन्दगी
विश्वकप खेल्नु एक सम्मानको विषय हो । फ्रान्सका लागि खेल्नु झनै सम्मानको कुरा हो, र यो एक सपना थियो । मेरो फुटबल यात्रामा धेरैले मार्गदर्शन दिएका छन् । जब म १३ वर्षको उमेरमा लेहाब्रेमा जोडिएँ, तब मलाई लागेको थियो मेरो करियर राम्रोसँग चलिरहेको छ । मैले सोचेँ आमा बुबा र घर छोड्न सजिलै हुनेछ । म त्यो बेला जीवन र फुटबलका बारेमा अपरिपक्व र बेवकुफ थिएँ ।
गत सिजनमा म्यानचेस्टर सिटीमा आवद्ध भएपछि मैले प्रिसिजन टुरमा लस एन्जलसमा उनीसँग भेटेँ । म उनलाई ‘हेलो’ भनेर सम्बोधन गर्ने तयारीमा थिएँ, तर उनले तुरुन्तै मसँग रणनीतिबारे कुरा गर्न सुरु गरे, तपाईंले बुझ्नुभयो उनी कति व्यावसायिक थिए ? तर उनी मतिर मुस्कुराउँदै आए, अंगालो मारेर निधारमा किस गरे । उनी हुन् पेप गर्डिओला ।
म सोच्छु, मेरो जीवन कस्तो हो ? पेरिसको आसपास हुर्किएका जो कोही फुटबलको सपना देख्छन् । मेरो सपनाले पनि तपार्इंलाई आश्चर्यमा पार्नेछैन । म पेरिसको आसपासको क्षेत्रमा हुर्किएको केटा हो । मैले फुटपाथमा फुटबल ड्रिब्बल गर्थेँ । मैले फुटबल बाहेक केही सोचिनँ । जब म सानो थिएँ, म दाइ र उसका साथीसँग सहर घुम्थेँ । उनीहरू खेलिरहेका हुन्थे, मलाई पनि खेल्न मन लाग्थ्यो । कहिले त म खेल्छु भन्दा लखेट्थे पनि, किनकी म निकै सानो थिएँ । मलाई धेरैले दाजुका कारण चिन्थे र म फुटबल ड्रिब्लिङ गर्दै हिडिरहेको हुन्थेँ ।
त्यो बेला म बेन्जामिन थिइनँ, मेरो दिमागमा त्यो थिएन । म सातदेखि नौ वर्षको उमेरसम्म बेन्जामिन थिइनँ ।
हो, म यस्तै सोच्थेँ । म कल्पना गर्थेँ, ‘म स्टेडियममा छु । मानिसहरूले झण्डा फहराइरहेका छन्, म देशको जर्सी लगाएर राष्ट्रिय गान गाउँदैछु ।’ मेरो कल्पनाले कहिलेकाहिँ समस्या समेत निम्त्याउँथ्यो । म एक दिन फुटपाथमा बल छक्काउँदै हिँडिरहेको थिएँ । मानिसहरू बाटो काट्न सिग्नलको प्रतिक्षामा थिए । मैले त्यतातर्फ ध्यान दिइनँ, म बल ड्रिब्बल गर्दै अघि बढेँ, मलाई एक कारले ठक्कर दियो । यो नाटकीय क्षण थियो । वास्तवमा कारको गति सामान्य थियो, तर मलाई ठक्कर दिन भने त्यो गति पर्याप्त थियो । कारको ठक्करबाट मलाई केही भएन । अस्पताल जानु परेन, कुनै चोट लागेन । तर मेरा आमाबुबा भने त्यो घटनाबाट निकै दुःखी हुनुभयो ।
घरमा बुबाले भन्नुभयो, ‘अब फुटबल खेल्न छोड र पढाइमा ध्यान केन्द्रीत गर ।’ आमाले अर्कै तरिकाले भन्नुभयो ‘तेरो दिमाग उडन्ते छ ।’ म उहाँहरूको कुरामा सहमत हुन सकिनँ । त्यसको समाधान झन् धेरै फुटबल खेल्नु थियो, कम होइन । बललाई नियन्त्रणमा राख्न सकेको र ध्यान दिएर हिँडेको भए म कारको ठक्कर खानबाट बच्ने थिएँ । अर्को दिन म बाहिर निस्किएँ र फेरि बल ड्रिब्बल गर्न थालेँ ।
म २००७ मा हाब्रेमा गएको थिएँ, म एक स्ट्राइकर थिएँ । म गोल गर्न चाहन्थेँ । जब प्रशिक्षकले सुझाव दिए, म स्ट्राइकभन्दा अन्य ठाउँमा फिट हुन्छु । त्यो बेला म खुसी थिइनँ । मैले उनलाई आफू स्ट्राइकर भएको बताउने कोसिससमेत गरेँ । तर म गलत र उनी सही रहेछन् ।
हाब्रे मेरो यात्राको सुरुवात थियो, जहाँ म मानिस बनेँ । जब म २०१३ मा मार्सेली गएँ, जहाँ फुटबलबारेको मेरो सोचाइ नै फेरियो । त्यहाँ मैले टेक्निक, स्ट्राटेजी सिकेँ । मार्सेलीमा मेरो दोस्रो वर्ष चलिरहँदा मार्सेलो बायेल्सा प्रशिक्षक भएर आए ।
जुन दिन मार्सेली आए, उनी निकै गम्भिर र व्यावसायिक थिए । उनले पहिलो पटक खेलाडीलाई सम्बोधन गर्दा एक पटक पनि मुस्कुराएनन् । रणनीतिको कुरा गर्दा उनीमा पागलपन देखिन्थ्यो । उनीमा फुटबलप्रतिको मोह थियो । त्यो मिटिङपछि मलाई एक साथीले भनेको थियो, ‘उनी सामान्य व्यक्ति होइनन् ।’ त्यो बेला उसले ठिकै भनेको थियो ।
मैले उनीबाट धेरै कुरा सिकेँ, कतिपय कुरा ‘अल्छिा लाग्दा’ समेत थिए । ती अल्छिालाग्दा कुराले पनि मलाई धेरै फाइदा पु¥याएका छन् । म पुराना खेलका भिडियो हेर्न निकै अल्छी मान्थेँ । म गम्भिर हुन्न थिएँ । भिडियो देखाउने सत्रमा म निदाइदिन्थेँ । जब म आँखा खोल्थेँ मार्सेलोले मलाई हेरिरहेका हुन्थे, र भन्थे, ‘म तिम्रो ध्यानको प्रतिक्षामा छु ।’ उनकै कारण मैले पुराना खेलका भिडियो हेर्न सिकेँ । भिडियो र रणनीतिमा चासो देखाउन थालेँ । त्यो सबै मार्सेलोको प्रभाव थियो, म सधै भन्छु, ‘मार्सेलोले मलाई जगाए ।’
यदि तपाईले मार्सेलीका समर्थकलाई सोध्नुभयो भने उनीहरूले पनि भन्नेछन्, ‘मार्सेलोले हामीलाई जगाए ।’ उनी सामान्य थिए, कडा मेहनत गर्थे, उनमा घमण्ड थिएन र टोलीलाई सधै उत्कृष्ट बनाउँथे । उनी निकै चर्चित व्यक्ति थिए, तर पनि चुपचाप सडकमा हिँडिदिन्थे ।
जब म मार्सेली छोड्ने तयारीमा थिएँ, त्यो निकै कठिन समय थियो । सहर र साथीसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध थियो । धेरैले म इंग्ल्याण्ड जान्छ भन्ने आशा गरेका थिए । मेरा एजेन्टले मलाई मोनाकोले चासो देखाएको सुनाए । मैले पुनः लिग वान नै खेल्ने निर्णय लिएँ । जब लिग वान को उपाधि जित्छु अनिमात्रै गर्वका साथ फ्रान्स भन्दा बाहिर खेल्न जान्छु भन्ने सोचेँ ।
हामीले २०१७ मा मोनाकोबाट लिग वानको उपाधि जित्यो, च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलसम्म पुग्यौं । यो उपलब्धीले सबैलाई आश्चर्यचिकत बनाएको थियो । त्यो सिजन हाम्रो युवा टोली एकै परिवार जस्तो थियो । हामीले जोर्डिमको नेतृत्वमा खेल्यांै । उनी मार्सेलो जस्ता थिएनन् । उनी एक सफलता चाहने र हरेक खेलमा रणनीति परिवर्तन गर्ने प्रशिक्षक थिए । प्रत्येक खेलपछि उनी आफ्नो रणनीतिको पुनर्मूल्यांकन समेत गर्थे । त्यसैले हामीले उनको नाम ‘ट्याक्टिको’ राखिदिएका थियौं ।
जब सिजन समाप्त भयो, हामीलाई थाहा थिएन की फेरी हामी सँगै हुन्छौं या हुँदैनौ । हामीले आफ्नो सरुवाबारे मिडियामा आउनुभन्दा अघि नै एकअर्कालाई सुनाउने बाचा गर्यौं । एक दिन बनार्डो सिल्भाले मलाई मलाई एक तस्विर पठाए । उनले म्यानचेस्टर सिटीको जर्सी लगाएका थिए । उनलाई मैले भनेँ, ‘के तिमीले पसलमा किनेर लगायौ ?’ उनले पोर्चुगाली शैलीमा भने, ‘म म्यान सिटीमा अनुबन्धित हुँदैछु ।’ मैले टिमोलाई फोन गरेँ उनले भने, ‘मेरो चेल्सीसँग कुरा हुँदैछ ।’ केलियनलाई फोन गरेँ, ‘मलाई केही थाहा छैन तर म पनि कतै जान्छु, यो बारे सोचिरहेको छ ।’ त्यो लगत्तै मैलेनि बनार्डोलाई म्यान सिटीको जर्सी लगाएको तस्विर पठाइदिएँ । हामी मोनाको छोड्दा दुःखी थिएनौं । हामीले जे हासिल गर्यौ, त्यो माथि गर्व थियो । अहिले पनि म ती पल याद गर्छु र खुसी हुन्छु ।
मरो जीवनलाई म्यानजेरहरूले खास आकार दिए । यो अधिकांश फुटबलरका लागि सत्य कुरा हो, तर कतिका लागि त्यो राम्रो भएको छ भने कतिका लागि नराम्रो पनि । तर म भाग्यमानी हुँ, किनकी मैले राम्रा म्यानेजरको अन्डरमा खेल्न पाएँ । तर पेप भन्दा उत्कृष्ट अरु कोही छैन ।
गत सिजन म म्यान सिटीमा जाने कुरा भइरहेको थियो । त्यो बेला पेप र म ह्वाट्सएपमा कुरा गथ्र्यौ । पेपको फ्रेन्च राम्रो थिएन, त्यसैले उनलाई पत्नीले सहयोग गर्थिन् । पेपसँग कुरा गर्दा म्यानेजरसँग कुरा गरिरहेको अनुभव भएन, परिवारसँग कुरा गरिरहेको झैं भयो ।
जब म नोभेम्वरमा घाइते भएँ, मलाई पेप सम्पर्कमा रहन्छन् जस्तो लागेको थिएन । तर उनले मलाई भुलेनन्, यसको मतलब उनी मलाई उत्कृष्ट फुटबलर बनाउन चाहन्थे ।
(फ्रान्सको राष्ट्रिय टोलीका सदस्य मेन्डीले द प्लेयर ट्रिब्यूनमा लेखेको आलेखको अनुवादित अंश)